Heathrow: Xidhitaanka Duulimaadyada transatlantic ee ku kacaya UK £ 23 Million maalintii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Heathrow: Xidhitaanka Duulimaadyada transatlantic ee ku kacaya UK £ 23 Million maalintii
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Maamulaha Heathrow, John Holland-Kay
In kasta oo ay tahay war fantastik ah in qaar ka mid ah rakaabka laba-tallaalka ah aysan mar dambe u baahan doonin inay karantiil ka ahaadaan dalalka amber, Wasiirradu waxay u baahan yihiin inay siyaasaddan u fidiyaan muwaadiniinta Mareykanka iyo Midowga Yurub haddii ay doonayaan inay bilaabaan waddanka dhaqaalaha.
Wadamada Yurub ee ka taageeray waaxyadooda duulimaadka dhamaan safka faafa waxay arkayaan kobocii ugu dhaqsiyaha badnaa markay kasoo baxaan masiibada.
Rakaabka ka yimaada Heathrow ee Mareykanka ayaa hoos u dhacay qiyaastii 80%, halka Midowga Yurub, oo si kaligiis ah u furay Mareykanka ay arkeen in taraafikada ay kasoo kabanayaan kaliya 40% hoos.
In Britain mar kale lala ganacsado adduunka intiisa kale waxay muhiim u tahay qorshayaasha dowladda ee Global Britain-Brexit post-Brexit.
Heathrow tirooyinka rakaabka ayaa wali ku dhaw 90% hoos u dhaca tirada safarka ee safka hore ee faafa ee 2019, aadna uga hooseeya kuwa la tartamaya EU.
Wadamada yurub ee ka taageeray waaxyadooda duulimaadka dhamaan safka faafa waxay arkayaan koritaankii ugu dhaqsiyaha badnaa markay ka soo baxaan masiibada. Schiphol iyo Frankfurt labaduba waxay dhaafeen tiradooda xamuul ee 2019, iyagoo koraya 14% iyo 9% siday u kala horreeyaan marka loo eego 2019, halka xamuulka culeyska Heathrow, dekedda ugu weyn ee Boqortooyada Ingiriiska ay wali hoos uga dhacayso 16%. Ku dhowaad dhammaan xamuulka hawada waxaa lagu hayaa diyaaradaha rakaabka, iyo xayiraadaha socdaalka ee UK ayaa xaddidaya ganacsiga marka loo eego kuwa naga soo horjeeda ee EU.
Xiritaanka xariirka Britain ee transatlantic-ka waxay ku kacaysaa dhaqaalaha UK ugu yaraan million 23 milyan maalintii. Rakaabka ka yimaada Heathrow ee Mareykanka ayaa hoos u dhacay qiyaastii 80%, halka Midowga Yurub, oo si kaligiis ah u furay Mareykanka ay arkeen in taraafikada ay kasoo kabanayaan kaliya 40% hoos. Faa'iidada tartan ee mudada dheer ee Britain ee ganacsiga transatlantic waxay halis ku jirtaa haddii xuduudaha ay sii xirnaadaan.
In Britain mar kale lala ganacsado adduunka intiisa kale waxay muhiim u tahay qorshooyinka Dowladda ee ku saabsan boostada Caalamiga ah ee Britain-Brexit. Heathrow kaligeed ayaa awood u leh inay fududeyso bon 204 bilyan oo ganaax ganacsi ah oo ka faa'iideysanaya ganacsiyada Ingiriiska ee gees kasta oo dalka ka mid ah, abuurista fursado dhammaan waaxda duulimaadyada iyo xoojinta isku-xidhka ganacsiga ee Boqortooyada Ingiriiska - laakiin waa haddii Wasiirradu u dhaqaaqaan inay dib u furaan ganacsiga sida ugu dhakhsaha badan.
Ku dhawaaqista in dadka degan UK ee laba-tallaal ah aan looga baahnaan doonin inay karantiil celiyaan markay ka soo noqonayaan liiska liiska amber-ka ee 19-kath Luulyo waa tallaabo weyn oo horay loo qaaday. Si kastaba ha noqotee si loo bilaabo dib u soo kabashada dhaqaalaha Ingiriiska, Dawladdu waa inay dib u furtaa safarka si buuxda looga tallaalay dadka dalal badan ka yimid, gaar ahaan shuraakadayada ganacsiga ee muhiimka ah sida Mareykanka. British Airways, Virgin Atlantic iyo Heathrow ayaa si wada jir ah u wada shaqeynaya si ay u muujiyaan in heerka tallaalka 100% lagu fulin karo baaritaanka, mana jirto sabab ay dowladdu ugu oggolaan weydo tan rakaab ka socda Mareykanka iyo Midowga Yurub oo ka socda 31-ka.st of July.
Maamulaha Heathrow, John Holland-Kaye ayaa yiri:
Inkasta oo ay tahay war cajiib ah in qaar ka mid ah rakaabka laba-tallaalka ah aysan mar dambe u baahan doonin in laga karantiilo dalalka amber, Wasiirradu waxay u baahan yihiin inay siyaasaddan gaarsiiyaan muwaadiniinta Mareykanka iyo Midowga Yurub haddii ay doonayaan inay bilaabaan waddanka dhaqaalaha leh. Isbeddeladan ayaa muhiim u noqon doona dhoofiyayaasha wax ku waaya kuwa la tartamaya Midowga Yurub iyo qoysaska laga soocay kuwii ay jeclaayeen. Waxaan haynaa dhammaan qalabkii aan dib ugu bilaabi lahayn safarka caalamiga ah, haddana waxaa la joogaa xilligii Global Britain ay duuli lahayd! ”